Fedora ပရောဂျက်: သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၎င်း၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုသိခြင်း၊ Linux မှ
Linux Post Install လုပ်ပါ | 13/09/2021 06:00 | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ
el en အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းစီမံကိန်းများစကြာဝာ ၎င်းသည် GNU / Linux နှင့် အခမဲ့ Software နှင့် Open Source Communitiesများစွာသောတန်ဖိုးရှိသောအချက်များအတွက်ထင်ရှားပေါ်လွင်သောကြီးကျယ်ခမ်းနားသောစီမံကိန်းများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုများ / ရပ်ရွာများ မီးမောင်းထိုးပြ Debian၊ Ubuntu၊ Mint၊ Arch နှင့်များစွာသောအခြားသူများအကြား၊ Fedora.
၎င်းသည်သိပြီးသားအတွင်း၌ဖြစ်သည် "Fedora စီမံကိန်း" ကြီးမားပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည် အသိုင်းအဝိုင်း အေးမြမှုကိုတည်ဆောက်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားသည် ထုတ်ကုန်များနှင့်အရင်းအမြစ်များ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူများအတွက် ပြီးတော့ဒီ post မှာသူတို့ထဲကအတော်များများကိုအကျဉ်းချုပ်ကြည့်မယ်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သောတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ကိုင်တွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ "Fedora စီမံကိန်း"ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်လင့်ခ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းချန်ထားပါမည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များမရ။ ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ပြီးသွားရင်သူတို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့စိတ် ၀ င်စားတဲ့သူတွေအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
"Fedora 34 ၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိထားပြီး download လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ဤ Fedora 34 ဗားရှင်းအသစ်တွင်အပြောင်းအလဲများစွာသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနှင့်အထူးသဖြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲဘက်ကို ဦး တည်သောကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများပါ ၀ င်သည်။
ဥပမာ၊ အသံစီးကြောင်းအားလုံးကို PipeWire media server သို့ရွှေ့လိုက်ပြီ၊ ယခု PulseAudio နှင့် JACK အစားပုံသေဖြစ်သည်။ များစွာသောသာလွန်သော PipeWire အပြင် Wayland အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။" Fedora 34 ကိုဖြန့်ချိပြီးပြီ၊ ဘာအသစ်လဲဆိုတာသိတယ်
Fedora မှာသူတို့က split တစ်ခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီး Fedora Linux လို့အမည်ပြောင်းလိုက်တယ်
1 Fedora ပရောဂျက်: လူအဖွဲ့အစည်းနှင့် software ပလက်ဖောင်း
1.1 Fedora Project ကဘာလဲ။
Fedora ပရောဂျက်: လူအဖွဲ့အစည်းနှင့် software ပလက်ဖောင်း
Fedora Project ကဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် del "Fedora စီမံကိန်း"၎င်းကိုအကျဉ်းအားဖြင့်ဖော်ပြသည်။
"ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ တိမ်များနှင့်ကွန်တိန်နာများအတွက်ဆန်းသစ်သော၊ အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး software developer များနှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များသည်၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုတည်ဆောက်ပေးနိုင်သည်။"
ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကသူတို့ချဲ့ထွင်တယ် ဖော်ပြချက်နှင့်နယ်ပယ် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
Fedora Project သည်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သောအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပြီးထိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောသုံးစွဲသူဗဟိုပြုဖြေရှင်းနည်းများကိုအတူတကွမျှဝေရန်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါတို့က Operating System တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးမင်းနဲ့အဲဒါကိုအသုံးဝင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ရလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးတယ်။
Fedora အလုပ်ရုံLaptops နှင့် desktop များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အစွမ်းထက်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော Operating System တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဝါသနာ ၀ င်များနှင့်ကျောင်းသားများမှစီးပွားရေးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအထိကျယ်ပြန့်သော developer များအတွက်အလွန်အကျိုးရှိစေမည့်အတွေးဖန်တီးထားသည်။ ၎င်းသည် GNOME3Desktop Environment ကို open source tools များအပြည့်အစုံနှင့်အတူပေးသည်။
Fedora ဆာဗာ၎င်းသည် community-supported Server Operating System တစ်ခုဖြစ်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိစီမံခန့်ခွဲသူများအား open source community တွင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများကိုသုံးခွင့်ပေးသည်။ ၎င်း၏ထင်ရှားသောဝိသေသလက္ခဏာများမှာ modularity မြင့်မားမှု (အပလီကေးရှင်းဗားရှင်းများနှင့်ထည့်သွင်းထားသောဘာသာစကားများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း) ဖြစ်သည်။
Fedora IoT (အရာများအင်တာနက်): ၎င်းသည် IoT ဂေဟစနစ်များအတွက်ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသော Fedora ၏ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်မှုတံခါးများ၊ စမတ်မြို့များသို့မဟုတ် AI / ML ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဲ့သို့အိမ်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံကိန်းများအတွက်စံပြဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ခိုင်မာပြီးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ယုံကြည်ရသော open source platform ကိုပေးသည်။
အခြားသူများကို စီမံကိန်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များ ရှိပြီးသားများမှာ
မဂ္ဂဇင်း- သင်၏အသိုက်အဝန်းအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်း ၀ က်ဆိုက်။
Alt ဒေါင်းလုပ်များ: Fedora ၏အခြားဗားရှင်းများကိုကမ်းလှမ်းသောအပိုင်း
Docs: လိုအပ်သောသုံးစွဲသူစာရွက်စာတမ်းများကို စုစည်း၍ စုစည်း၍ အပိုင်းလိုက်ပံ့ပိုးပေးသည်။
လှည့်ဖျားGNOME မှလွဲ၍ Desktop Enviroments များတွင် Fedora ၏ Editions (Spins) များကိုပံ့ပိုးပေးသောစီမံကိန်း
Fedora LabsFedora အသိုင်းအဝိုင်းမှအဖွဲ့ဝင်များကပြုစုထိန်းသိမ်းထားသည့်ရည်ရွယ်ချက် ဦး တည်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆော့ဝဲများကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းရွေးချယ်ခြင်းကဏ္ Section ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
CoreOS ပါ: အလိုအလျောက်မွမ်းမံမှုများနှင့်ကွန်တိန်နာများကို ဦး တည်သော၊ ရိုးရှင်းသော operating system ။ သူတို့၏ပန်းတိုင်သည်ကွန်တိန်နာတင်သောအလုပ်များကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာနှင့်စကေးဖြင့်အကောင်းဆုံးကွန်တိန်နာအိမ်ရှင်အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။
ငွေရောင်ကွန်တိန်နာဗဟိုပြုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်မပြောင်းလဲနိုင်သော (မပြောင်းလဲနိုင်သော) desktop operating system Fedora Workstation ၏ဤပုံစံသည် developer အသိုင်းအဝိုင်းကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
မှတ်ချက်နောက်လာမယ့်ပို့စ်တစ်ခုမှာငါတို့အကြောင်းနည်းနည်းပိုရှင်းလိမ့်မယ် Fedora Silverblue.
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်လက်ရှိတွင် "Fedora စီမံကိန်း"a၏အောင်မြင်သောရလဒ်ဖြစ်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူများ၊ developer များ ထုတ်လုပ်ခဲ့သောအခြားပညာရှင်များ၊ အလွန်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောတိုးတက်မှုများ၎င်းကိုလိုချင်သူနှင့်လိုအပ်သူတိုင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသောအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Fedora စီမံကိန်း၊ သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်၎င်း၏လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများကိုသိခြင်း
ထို fedora သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ လုံခြုံရေးအရစိတ်ချရတာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာနဲ့ဘဲ၊ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုမင်းကကျရှုံးပြီးမင်းကိုပြင်းထန်တဲ့ပြသနာတွေပေးလိမ့်မယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမင်းထင်သလိုဘဲ၊ အဲဒါကကွဲသွားလိမ့်မယ်။ Fedora သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်ပြီး Linux ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင်၎င်းကဲ့သို့အခြား gnome များမရှိချေ။ ဒါပေမယ့်အဆုံးစွန်ဆုံးမှာကျိုးသွားတဲ့အတွက်ငါအဲဒါကိုမသုံးတော့ဘူး။ ၎င်းအစား debian စမ်းသပ်ခြင်းကိုလက်တွေ့တွင်၎င်းသည်မသိသောအရာဖြစ်သည်၊ လူများက၎င်းကိုစမ်းသပ်ခြင်းဟုခေါ်သောကြောင့်၎င်းသည်စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ hahaha၊ ၎င်းသည်စမ်းသပ်သော်လည်း၎င်းတို့သည် fedora, arch နှင့် delicacy ထက်များစွာရှေးရိုးစွဲကြသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ မရ။ စမ်းသပ်ရန်လာသော package များကို suuuper ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးသည်နှင့်အများစုသည်၎င်းတို့အားပြဿနာသေးသေးလေးများပေးနိုင်သည်၊ သို့သော် kde နှင့် nvidia တို့နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုလုပ်လျှင်သင်အစကနေပြန်လည် install လုပ်ရန်ပြင်းထန်သောအရာမရှိပါ။ ငါစမ်းသပ်တာ ၃ နှစ်ရှိပြီ၊ အဲဒါကငါ့ကိုအနည်းဆုံးပြဿနာတွေ၊ အထူးသဖြင့်သုညပြသနာတွေပေးခဲ့တဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုပဲ၊ ငါကစမ်းသပ်မှုထက်တည်ငြိမ်ပြီးလေးနက်တဲ့ debian ပြဿနာတွေပိုရှိခဲ့တယ်။ Fedora ကျိုးပဲ့သည်၊ မင်းကိုပြောပါ၊ သို့မဟုတ်မင်း manjaro လည်းပျက်သွားသည်။ Debian စမ်းသပ်ခြင်း၊ မချိုးဖျက်ခြင်း၊ ၎င်း၏အသန့်ရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်တည်ငြိမ်ခြင်း
မင်္ဂလာပါ၊ စမ်းသပ်မှုများ Fedora နှင့် Debian Testing တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံမှသင်၏မှတ်ချက်နှင့်ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်က Fedora ကိုသုံးသောသူတိုင်းတွင်တည်ငြိမ်မှုရှိ Debian ကိုငြူစူရန်နှင့်အဆင့်မြှင့်ထားသောစနစ်ရှိခြင်းသည် Arch မရှိကြောင်းသိသည်။ ၎င်းအပြင်ရေတွက်သောနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများသည် Fedora မှရိုးရှင်းသည့်အကြောင်းပြချက်များဖြင့်၎င်းတို့သည် Fedora ထက်စော။ ပိုကောင်းသည်။ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကဆောင်းပါးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး၊ မင်းစိတ် ၀ င်စားဖို့သက်သက်ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ Fedora Workstation သည်ခေတ်မမီတော့ဘဲတည်ငြိမ်မှုကိုမချိုးဖျက်ဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်ကဲ့သို့တည်ငြိမ်သည်
ဆောင်းပါးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး fedora silverblue ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုငါမျှော်လင့်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Fedora Workstation နှင့် Silverblue သုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် debian, openSUSE, Ubuntu, manjaro, arch ၏သုံးစွဲသူဟောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယနေ့အကောင်းဆုံး linux distro သည် Fedora Workstation ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
@Testingsi၊ Debian စမ်းသပ်ခြင်းကိုအတိအကျမသိရသေးပါ၊ ကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်၊ လူများကအသေးစိတ်မသိဘဲ၎င်းကိုသုံးသည်။ မင်းတည်ငြိမ်မှုမဟုတ်ဘူး၊ Fedora မှာလုံခြုံမှုကောင်းအကြောင်းပြောရင် Debian စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုစလုံးမရှိတာကတဖက်မှာလုံခြုံရေးအပ်ဒိတ်တွေတည်ငြိမ်ပြီးအနည်းဆုံးတစ်ပတ်အကြာမှာ (စမ်းသပ်မှုအထုပ်များပြန်လည်တည်းဖြတ်ပုံလက်စွဲစာအုပ်ကိုလေ့လာပါ) သက်တမ်းကုန်နေသော Firefox (သို့) ၎င်း၏ update မူဝါဒကြောင့်ကျိုးပဲ့နေသောလပေါင်းများစွာကိုသင်ပြီးပြည့်စုံစွာနေနိုင်သည်၊ ဗားရှင်းပဋိပက္ခမရှိသရွေ့သင် pinning လုပ်နိုင်သည်။ မရ။
မင်္ဂလာပါ၊ Autopilot ။ မင်းရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။